अक्षय कुमार कसरी महँगो भए ? | Screennepal
२०७६, १२ माघ आईतवार ०६:३८screennepalbollywood, Exclusive, hot news0
भनिन्छ, बलिउडमा खान हिरोहरूको एकछत्र राज छ । तर, यो भनाइ पछिल्लो समय सान्दर्भिक नलाग्न सक्छ किनकि बलिउडमा अहिले महँगा हिरो खान नभएर अक्षय कुमार भएका छन् ।
अक्षय कुमार कसरी बलिउडमा महँलो हिरो भए ? कारण यस्तो छ, पछिल्लो समय बलिउडमा यदि कसैको फिल्म लगातार सुपरहिट छ भने त्यो अक्षय कुमारकै हो ।
गत वर्ष अक्षय कुमार अभिनित, केशरी, मिशन मंगल, हाउसफुल–४ र गुड न्यूज गरी चार फिल्मले बलिउड बक्सअफिसमा विश्वव्यापी रूपमा हजार करोड भारु बढीको कमाइ गरेको थियो ।
त्यस्तै, उनको पछिल्लो रिलिज फिल्म ‘गुड न्यूज’ले त अझै बक्स अफिसमा उल्लेखनिय व्यापार गरिरहेको छ । लगातार फिल्म सफल भइरहेकाले बलिउडका निर्माता–निर्देशकको आँखा अहिले समय अक्षय कुमार तीर सोझिएको छ ।
केही समयअघि मात्र अक्षय कुमारले बासु भगनानीको फिल्मका लागि सय करोड भारु पारिश्रमिक लिन लागेको समाचार आएको थियो । उक्त पारिश्रमिकको अंकले सबैको ध्यान तानिरहेको बेला मंगलबार उनको पारिश्रमिकको नयाँ रेकर्ड सार्वजनिक भएको छ ।
बलिउडसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्ने ‘बलिउड हंगामा’ का अनुसार अक्षयको नयाँ पारिश्रमिक रेट १२० करोड भारु पुगेको छ । उनले ‘राझंणा’ तथा ‘जिरो’का निर्देशक आनन्द एल रायको नयाँ फिल्मका लागि उक्त रकम लिएको बताइएको छ । यो पारिश्रमिकले अक्षयलाई बलिउडमा सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने अभिनेता बनाएको छ ।
फिल्ममा अक्षयका अलावा तमिल सुपरस्टार धनुष र सारा अलि खान अनुबन्धित भइसकेका छन् । यस फिल्मको सुटिङ यसै वर्षको मध्यबाट सुरु हुने बताइएको छ । यस वर्ष अक्षयका तीन फिल्म रिलिज हुँदैछन् । जसमा ‘सूर्यवंशी’, ‘लक्ष्मी बम’ र ‘ पृथ्वीराज’ रहेका छन् । यसलाई मध्येनजर गर्दा सन् २०२० मा अक्षय बलिउडमा अग्रस्थानमा रहने पक्का छ ।
Previous Postमुस्ताङको माइनस १० डिग्रीमा भेटिइन् जुरेली (भिडियो) Next Postटुँडिखेलमा सोनाम ल्होसारको रौनक (फोटोफिचर)